CV ngokuhlanganyela, noma njalo Isivinini ngokuhlanganyela, - indlela ngayo nefunda ngayo torque engu sisuka uhlelo ukudlulisela isondo. Kulesi wagxila idluliselwa ku amasondo ukushayela ngaphandle kwama ukulahlekelwa amandla. Mshini ivumela ukunikeza rotations degrees 70.
Kunezinhlobo eziningana njalo Isivinini amalunga omzimba, ezisetshenziswa phambi-wheel drive izimoto. Suharikovye yavulwa ngokuyinhloko ukuze amaloli esindayo noma amabhasi. SHRUS tripoidny elisetshenziswa izakhiwo yangaphakathi ngenxa Axial ukufuduka yabo izici. Kufundza ngababili emincane Cardan emalungeni akuzona athandwa kakhulu ngenxa isakhiwo eziyinkimbinkimbi. Ball njalo Isivinini emalungeni ivamile phezu phambi wheel drive izimoto. Lezi zifakwa ku onobuhle kusukela "AvtoVAZ".
Umsebenzi futhi indawo lomnyango
Iqiniso lokuthi la masayithi, yini abasibekela, osaziyo inombolo encane abashayeli. Futhi nakakhulu - ezithangamini ezehlukene, lokhu ucezu has a lot of amagama.
Lokhu tripoidny CV amalunga, njalo Isivinini emalungeni kwangaphakathi futhi tripoid, ngokuvamile nje emhlophe. Kodwa, noma kunjalo, kungcono njalo-Isivinini ngokuhlanganyela, kodwa ezinye izici design. Ngokuvamile, kungaba lezi zinhlelo ezitholakala izimoto kwi drive ohlangothini. Futhi, yonke umshayeli kufanele wazi ukuthi lokhu kuyingxenye ezinamasondo ka umumo eyindilinga futhi ngemfoloko. Lesi sakhiwo ivumela engeyokuqala ukuhambisa axially ngaphakathi kwemikhawulo ububanzi, ngenkathi iqinisekisa ukuthi emincane Isivinini izinguquko.
Kungani sidinga tripoid?
Imoto Ungahambisa ngenxa idrayivu, okuyinto okuhambisa torque engu amasondo ukushayela. Kodwa uma lesi simiso bebengekho CV amalunga omzimba, okwamanje amasondo turning amasondo ngeke akwazi ukujikisa. Futhi ngenxa yokuthi tripoidny SHRUS inezici ezithile design, engele phakathi lapho imiphini oluvala amasondo iyashintsha. Ngenxa yalokho, uhamba umshini, kungakhathaliseki isikhundla lapho ehamba phambili enophephela amasondo.
Umlando SHRUS okusungulile
Okokuqala njalo Isivinini ngokuhlanganyela yasungulwa ngo-1927. I-patent lamasu kuyinto ongunjiniyela Alfred Rtsepp - design eside kakhulu wazala igama umakhenikha. Namuhla abashayeli idivayisi ngegama elula - "Grenade". Le mininingwane ingenye Izingxenye eziyisisekelo ngamunye phambi wheel drive imoto. Kodwa SHRUS isethwe ezingemuva wheel drive izimoto, ngisho wonke-wheel drive. Endabeni wonke-wheel izimoto drive, le lomnyango kuyadingeka ukuqinisekisa enkulu rigidity gearbox ezingemuva obandayo. Futhi, ngenxa isicelo se-elementi enikeziwe in the ezimele ukumiswa labaqaphi elingemuva.
Kanjani njalo Isivinini emalungeni
Lapho ehluleka tripoidny njalo Isivinini amalunga omzimba ukuze Vaz "Ngaphambi", kuvela ukuthi akuzona zonke umshayeli uyazi ngakho ngokwanele. Nakuba umklamo lomnyango ulula. Kodwa endaweni lapho efakwe, futhi eziyinkimbinkimbi ukwehluleka ophoqelelwe abanikazi imoto isicelo iziteshi ukulungisa. Njengoba ungacabanga, lokhu kuyinto isinqumo okungekuhle. Kuyinto ukuqonda imininingwane design yabo.
Mangisho ukuthi ngokuhlanganyela ukuphila velocity njalo iphakeme kakhulu, futhi uma lokunakekela kahle injini kanye nokugcina ke ngendlela esifike ngesikhathi, bese-ke ungasebenza amakhilomitha 200-300 eziyinkulungwane nokuningi. isimiso sayo ukusebenza Kuthi efana idivayisi iphinde umsebenzi lomuntu ngokuhlanganyela. Kodwa ngokungafani ngamadolo SHRUS tripoidny likwazi isakhiwo esilula.
Iinsetjenziswa ibhola SHRUS
Thina siqale yangaphandle aphethe kulandzelana nekuhlunga tinsita. Mshini siqukethe bezinhlamvu ngesimo endishini eyindilinga kanye izimbobo okukhipha kushaft splined.
Ngaphakathi kunjalo kuyinto isiqeshana ofana isibhakela uyisiyingi, futhi idrayivu shaft. Futhi, indlela siqukethe isihlukanisi ngesimo izindandatho nge izimbobo therein kwenziwa ngoba esaziwa amabhola. Futhi-ke, ingabe idivayisi inakho amabhola ngokwabo.
Design izici tripoidnogo eziveza
SHRUS tripoidny kusukela esihluke evamile kuphela ukuthi amabombo akusiyo ibhola, futhi inaliti. Mshini has izindiza ezintathu lapho sihlobene ezintathu inaliti setha. Ngesisekelo zangaphandle lomnyango amabhola amanga. Futhi kule kwangaphakathi - ezinamasondo ne amabombo inaliti hlobo. Kungakhathaliseki lomnyango wangaphandle noma yangaphakathi - phezulu imininingwane edingekayo ukuze usethe zibhonge. Kuvikela igiya kusuka izintuli nokungcola.
Ngokungafani ezivamile kokuhlanganisayo ibhola uhlobo njalo Isivinini emalungeni tripoidny yangaphakathi - indlela obucayi xaxa. Uma lungena ngisho esincane ukungcola, kungaholela izingxenye isakhiwo. Futhi, umehluko ku mnandi. Kufanele eziklanyelwe inaliti roller amabombo. Omunye lapha asifanele.
Tripoidny CV ngokuhlanganyela ngokuvumelana imodeli kungase kudingeke ngamazinga ahlukene inkululeko okuyinto lamasu okuhambisa a ukudluliswa kusuka amasondo. Imisebenzi yalolu phiko ukuqinisekisa ukujikeleza bushelelezi kakhulu. Esikhathini ngokuhlanganyela jikelele we semiaxes laying engenawo umsebenzi ofanayo, kodwa amakhono anjalo akusiyo. Ngisho noma omunye-semi-eksisi sizophenduka ngokulinganayo ke torque yesibili idluliselwa ngezikhathi.
Ngenxa yokuthi umklamo wasebenzisa inaliti amabombo, izinto ezifana abe ukumelana eliphezulu kakhulu ukugqoka. Futhi kakhulu ziyancipha ukulahlekelwa ngenxa ukungqubuzana phakathi izingxenye engeyokuqala. Tripoidny CV ngokuhlanganyela 2110 ingase ibheke i-engela degrees 18. Ngokuphathelene esiphezulu Axial ukunyakaza, lesi sibalo isesikhathini 55 kwangu. Lo mshini ziyakwazi ukuzivumelanisa nalolu vibration yenjini futhi ukudlulisela engaphezu kwengu-60%. Isici imininingwane yokuthi asikwazi kabana lapho isikhashana, kokushiya imoto ngaphandle kokuba nokwenzeka ukuhamba phambili. Lokhu kubalulekile ngoba abalandeli ogibele off-road futhi indondo-kuphangwa. Yize imisindvo omnandi nokudludliza, entweni isimo obonakele kuzovumela ukuya esiteshini inkonzo.
Yikuphi SHRUS kangcono?
Phakathi abashayeli kungekho ukuvumelana ngalokho umklamo kungcono, ngakho kule ngesisekelo kukhona lukhulu impikiswano. Abanye bathi tripoidny SHRUS kangcono, abanye - ukuthi ibhola. Abaningi kule ukukhululwa uyazuza kokuhlanganisayo tripoidnyh.
Ngakho, lezi zinhlelo bayakwazi ukusebenza backlash esincane noma abangenaso nhlobo ngaleso engeli kuze kufinyelele 45 degrees. Leli sondo kungenziwa rotated at engele okwanele. Izinzuzo zihlanganisa enokwethenjelwa futhi ihlala isikhathi eside, a ukunyakaza enkulu longitudinal, ukumelana torsional, ukusebenza kahle omuhle. Futhi ukugqamisa inkimbinkimbi ukufakwa, esikhundleni kanye nokugcinwa ngenxa lemali enkulu isikhala esikhundleni ukufakwa kwalo. Emuva esivuna tripoidnogo SHRUS ungasho ukuthi kahle wakubeka esikhundleni ibhola, noHezekeli. Tripoidnye kokuhlanganisayo ube izingxenye ezimbalwa isakhiwo. Ngakho, lo mshini eshibhile ukukhiqiza futhi kancane zinkulu.
Akungabazeki ukuthi kungcono ukuthenga kokuhlanganisayo tripoidnye Kukhona. Banezinhliziyo ukusebenza ephakeme futhi uma zokugwema ukuphuka kuzovumela imoto ukuya endaweni ukulungisa.
Mayelana igrisi tripoidnyh ngoba kokuhlanganisayo
Ochwepheshe bathi amafutha iCV emalungeni kudingeka tripoidnogo ngokuqinile ekhethekile yakhelwe inaliti roller amabombo. Nokho, ukusebenzisa igrisi 158, okuyinto ngokunembile eyenzelwe inaliti-uhlobo amabombo, akuvunyelwe nakancane.
Ukuze yokukhiqiza kuba esetshenziswa lithium thickeners. Isebenza okushisa esingeqile degrees 120. Ihhuku yangaphakathi kungenzeka ukufuthelana okushisa phezu degrees 160. Namawoyela ngoba kokuhlanganisayo yangaphakathi - ketshezi. Basuke Kunconywa ukuba ugcwalise anther, okuyinto ogibele drive, bese ukuqoqa umklamo. Thela ngokuvamile kusukela 100 kuya 130 amagremu. amanani Okuningi eqondile kucacise umenzi.
I amafutha namuhla kokuhlanganisayo
Ngokuvamile, le mikhiqizo zenziwa esekelwe uwoyela amaminerali futhi ngaphezu kwalokho aqukethe molybdenum disulfide njengenhlangano okufakiwe anti-friction. Lokhu amafutha omnyama, futhi eziningi kangaka ukudida ngayo graphite zokugcoba ukuthi kukhona sebekubeke asihambisani njalo Isivinini amalunga omzimba. Ordinary "Litol-24" has a ababuthakathaka anti-friction izici futhi azithandi buxhomeke.
Tripoidny SHRUS 2110 nezinye amamodeli we imoto Kunconywa ukuba gcoba imikhiqizo ekhethekile esekelwe barium yombala. umehluko wabo - ubanzi lokushisa amabanga lapho igrisi ongasebenza ngaphandle ukusebenza ukulahlekelwa. Ngakho, ke akaphelelwa impahla yayo at okushisa kusuka degrees -30 kuya +160.
Ejwayelekile iphutha tripoidnyh amalunga izimbangela
Lezi izindlela zenziwa ephezulu amandla izinto angasetshenziswa isikhathi eside. Kodwa ngasizathu simbe, kulezi zingosi lisehluleka.
Isizathu sokuqala - kuyinto nolaka ukushayela isitayela. Kunamandla umshayeli ngeke sicindezeleke le isinyathelo namafutha, umthwalo ukuhlolwa okwengeziwe ukushayela futhi, ngokufanelekile, eziveza tripoidny. Isizathu sesibili ukuthi node ehluleka - lena anther umonakalo. Ngenxa yalokho, indlela leli ukungcola nothuli ukuwa, lapho ukwanda ukuhilizisana. Izimpawu zokuqala ukwehluleka zingakhiqiza vibration uma ushayela imoto noma ngesikhathi ukushesha. It kungabuye wazizwa uma ushayela ngesivinini. Ekugcineni, ohlangothini injini uzobe sizwe umuntu engqongqoza uma ushayela ngesivinini aphansi.
Uma uhlangabezana lezi zimpawu, kumele uya flyover noma umgodi kwehlwaya kanye ukuxilonga emalungeni ngokucophelela. Kulokhu, kudingeka uhlole amadivayisi yangaphakathi nje kuphela kodwa futhi yangaphandle. Uma ubona ngisho ukulimala ezincane kuya anther ke awukwazi ukuhambisa kule moto. Kungase kube ingozi. Kulokhu, ochwepheshe batusa ukuba ahlukanisa lento ngikugeze, esikhundleni uphawu uwoyela ukufaka edlule. Ungakwazi futhi ukuthi uhlele indlela entsha ngokuphelele.
Uma sihlaziye Izibuyekezo abanikazi imoto, izincomo kwabakhiqizi kanye neseluleko Mechanics abaqeqeshiwe, kubalulekile ukuhlomisa imoto nge njalo Isivinini emalungeni tripoidny. Ibhola Phiko kangako, ngakho ngokushesha ukuba afiphale + futhi zidinga ukushintshwa. Ngokuphathelene nale nqubo, kuyoba okubhekana abashayeli abanokuhlangenwe ubuncane amakhono inkonzo. Ukuze ukulungisa akudingekile ngisho ukuba umgodi wokubuka - nje jacking ingxenye ofiselekayo semoto ukuqaqa ihabhu.
Ngakho, lapho sathola khona ukuthi tripoidny njalo Isivinini ngokuhlanganyela.
Car BMW 335i: ezibekiweko lobuchwepheshe, izithombe kanye nokubuyekeza
Acer Aspire 5720-Notebook: Izici, ku-